အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၁,၉၀၀ ရှိ စက်မှုအဆောက်အဦ အကြွင်းအကျန်များနှင့် သင်္ချိုင်းဟောင်းကြီးတစ်ခု တူးဖော်တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ဂျေရုဆလင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များသည် မကြာသေးမီက သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၁,၉၀၀ ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည့် စက်မှုအဆောက်အဦ အကြွင်းအကျန်များနှင့် သင်္ချိုင်းဟောင်းကြီးတစ်ခုအား တူးဖော်တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်း Isreal Antiquities Authority (IAA) က နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
၎င်းသည် ရှေးဟောင်းမြို့တော် Yavne တွင် ပထမဆုံးတွေ့ရှိ သည့် အဆောက်အဦ ဖြစ်ပြီး Sanhedrin အနွယ် တော်ဝင်ဂျူးလူမျိုးများ၏ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကျင်းပရာ နေရာဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့်တွင် ဂျေရုဆလင်မြို့ကျရှုံးပြီးနောက် ရောမများက Yavne မြို့သို့ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆောက်အဦတွင် ထုံးကျောက်ခွက်အပိုင်းအစများပါ၀င်ပြီး ထိုနေရာ၌နေထိုင်သူများသည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ထုံးတမ်းဓလေ့အားလိုက်နာသည့် သီလစင်ကြယ်ခဲ့ကြသူများအဖြစ် ထင်ရှားသော အထောက်အထားများ တွေ့ရှိရကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆောက်အဦ၏ မီတာ ၇၀ အကွာတွင် ဂူသင်္ချိုင်း တစ်ခုရှိပြီး အုတ်ဂူများစွာကို အကွာအဝေးတစ်ခုစီ စီရရီတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအချို့ ခေါင်းတလားများကိုကျောက်သားများနှင့်အများစုဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသည်။
တူးဖော်တွေ့ရှိမှုများသည် မြို့တော်ရှိ ဂျူးအသိုင်းအဝိုင်း၏ သင်္ချိုင်းဂူများဖြစ်ကြောင်း နှင့်အနုအစိတ်ဆုံးလက်ရာမြောက် ဂူသင်္ချိုင်းများမှာ Yavne မြို့ရှိ ဂျူးပညာရှိများ၏ ဂူသင်္ချိုင်းများ ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း သုတေသီများက အကဲဖြတ်ခဲ့ကြ သည် ။
သုတေသီအဖွဲ့သည် သင်္ချိုင်းဂူများ၏ ထိပ်တွင် ဖန်ခွက်ပေါင်း ၁၅၀ ခန့်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှာအမွှေးနံ့သာဆီကဲ့သို့သော အဖိုးတန်အရည်များကို ထည့်သွင်းပူဇော်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်းသိရသည်။
“တွေ့ရှိချက်တွေဟာ မိမိတို့အားလုံး သိရှိထားခဲ့တဲ့ ဂျူးဘာသာရဲ့ မူလ ဇစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ Yavne မြို့ခံ Sanhedrin အနွယ် တို့ ရဲ့ ဘဝတွေနဲ့ ကွယ်လွန်မှု ဆိုင်ရာ အထောက်အထားတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း” ဟု သုတေသီများက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ (Xinhua)
#Isreal #discovers #cemetery #1,900years #Jerusalem #Roman #Jew #xinhua #xinhuamyanmar #အစ္စရေး #ဂူသင်္ချိုင်း #တူးဖော်တွေ့ရှိမှု #ဂျေရုဆလင် #ဂျူးလူမျိုးများ #ဆင်ဟွာ #ဆင်ဟွာမြန်မာ
JERUSALEM, Nov. 29 (Xinhua) — Israeli archaeologists have discovered remains of an industrial building andanearby wide cemetery, both dating back to about 1,900 years ago, the Israel Antiquities Authority (IAA) said Monday.
“The findings are evidence of the life and death of Yavne’s inhabitants at the time of the Sanhedrin, where the foundations of Judaism as we know it were laid,” the researchers concluded. Enditem